बोराभित्रको बास ! – जीवन शैली
Home /जीवन-शैली, प्रमुख समाचार/बोराभित्रको बास !
करिब रातको १० बजेको समय । काठमाडौँको सडक चकमन्न बन्दै गए पनि शुक्रबारको रात अघिपछिभन्दा सवारीको चाप बढी नै थियो । साना सवारी र मोटरसाइकल कालीमाटी हुँदै कलङ्की, बल्खु र त्रिपुरेश्वर हुइकिँदै थिए ।
काठमाडौँमा जाडो शुरु भइसकेको छ । बिहान–बेलुका न्याना कपडा नलगाई हिँड्न गाह्रै हुन्छ । त्यो पनि रातको १० बजे चिसो सिरेटो नचल्ने कुरै भएन । कालीमाटीबाट बल्खु जाने सडको दायाँबायाँका सटरहरु बन्द थिए । सटरमुनिको सडकपेटीमा सामान हालेर राखिएझैँ बोराको लस्कर प्रहरीको ज्याकेट टल्किए जसरी टाढैसम्म टल्कियो । बोरासँग दर्जनौँ कुकुर गुडुल्किएर सुतिरहेका थिए । नजीक पुग्दा बोराका बीचबीचमा केही मान्छे मजेत्रो ओढेर सुतिरहेका देख्यौँ ।
बत्तीको उज्यालो र मानिसको चहलपहल बढेपछि बोराबाट मुन्टो निस्कियो । तब थाहा भयो, बोरामा त मान्छे रहेछन् । फेरि त्यही बोराबाट अर्को पनि मुन्टो निस्कियो । तातो हुने भएर होला एउटै बोरामा दुईजना पसेका । चिसो सडकपेटीमा सामान्य थोत्रा कपडा लगाएका उनीहरुको आश्रयस्थल, ओढ्ने ओच्छ्याउने सबै त्यही बोरा रहेछ । अघि देखिएका सबै बोरामा यसैगरी मानिसभित्र पसेर सुतिरहेको रहस्य केही क्षणमै खुल्यो । कोही कार्टुन त कोही पातलो मजेत्रोको सहारा जिएर जाडो छल्दै निद्रा पर्खंदै थिए । कोही एक्लै बरबराउँदै थिए । सडकपेटीको चिसो भुल्न धेरै मदिरामा लट्ठ थिए ।
उनीहरुकै भनाइमा दिनभर कुनै न कुनै काम गर्ने रात परेपछि मदिरा खाएर सडकमा सुत्ने वर्षौंदेखिको दैनिकी हो । गन्ती गर्दा यसरी लस्करै सुतेका ४३ जना भेटिए । उदयपुरका किरण र हिमाल मगर एउटै बोराभित्र हुनुहुन्थ्यो । नजीकै सिसा पसलमा काम गर्ने हिमालले यसरी सुत्नुको कारण खोल्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसैले बस्ने कोठा दिँदैन, कोठा पाउन बूढी चाहिन्छ रे, सिसावालाले पनि बस्न दिँदैन, यहाँ नआए कहाँ जाने त ?” यति भनेपछि उहाँले मुन्टो बोराभित्र छिराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यसरी सडकपेटीमा सुतेको वर्षौं भयो । हिमालसँगै एउटै बोरामा सुत्ने किरण कालीमाटी तरकारी मण्डीमा मजदुरी गर्नुहुन्छ । झण्डै १८ महिनादेखि किरणको दैनिकी पनि यसरी बितिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र मानवसेवा आश्रमका प्रतिनिधिमार्फत सडकमा यसरी बस्न नपाइने जानकारी पाएपछि किरणले सोध्नुभयो, “के हामीलाई अब लान्छ ?, हामी काम गरेर खाने मान्छेलाई यसरी उठाएर लान कहाँ पाइन्छ, यो कसैको सडक होइन, हामी सुत्न पाउँछौँ ।”
आफ्नो कुरा सकेर किरणले पनि मुन्टो बोराभित्र छिराउनुभयो । जब यहाँका सटर लाग्छन् तब मजदुर, मगन्तेको चहलपहल बढ्ने गरेको डिउटीमा रहेका ट्राफिक एक प्रहरीले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा पनि यस्तै दृश्य थियो । इलाम पशुपतिनगरका राजु तामाङ चोकको सडकपेटीमा एक महिलासँग लुट्पुटिएर सुत्नुभएको थियो । हालसालै विदेशीले दिएको सुकिलो त्रिपालको ओत लागेर प्रतीक्षालयको कुनामा च्यातिएको मैलो मजेत्रो ओढेर सुत्नुभएका उहाँको निद्रा हामी पुग्ने वित्तिकै भङ्ग भयो । श्रीमती भनिएकी महिला भने गुट्मुटिएर भित्रै लुक्नुभयो ।
उहाँको काम कवाडी र कार्टुन टिप्ने तथा बेच्ने हो । सुतेकी महिला आफ्नै श्रीमती बताउने तामाङले यो आसपासमा १५/२० जना यसरी नै सुत्ने गरेका बताउनुभयो । “आज हामी जानकारी गराउन आएको, अब भोलिदेखि यसरी सडकमा सुत्न हुँदैन, भोलिदेखि नबस्नुस् हैन”, मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीको भनाइमा उहाँले मुन्टो हल्लाउँदै सहमति जनाउनुभयो ।
यस्तै दृश्य शुक्रबार राति शोभा भगवतीको मन्दिरमा समेत देखिन्थ्यो । मदिरामा मस्त भएका व्यक्ति मन्दिर परिसरमा पनि लस्करै थिए । अत्यधिक मदिरा खाएकाहरु सिँढीमा त्यसै लडिरहेका थिए । नयाँ बसपार्क गोङ्गबु क्षेत्रमा माग्दै हिँड्ने भारतीय नागरिक बसपार्क छेउमा सानासाना टेन्ट लगाएर बसेका छन् । शुरुशुरुमा नेपाली नै भएको बताउने उनीहरुले पछि भारतीय भएको स्वीकारे । भारत रुपौडियाका मणिराम पत्थरकटले भन्नुभयो, “हामी केहीले बाटा बेच्ने गरे पनि महिला र बच्चा सडकमा माग्छन्, उनीहरुलाई लैजानुस्, हामीलाई केही नगर्नुस्, हामी बाटा बेचेर कमाउँछौँ ।”
बसपार्कमा झण्डै ५० जनाले यसैगरी माग्ने पेशा अङ्गालेका छन् । महिला र बच्चाले खुट्टै समाएर माग्दा यात्रु तथा पर्यटकले दिक्क मान्ने गरेका छन् । यसअघि उनीहरु नजीकै रहेको शिवमन्दिर क्षेत्रमा थिए । त्यहाँबाट हटाएपछि बसपार्कलाई आश्रयस्थल बनाए । बिहान बसपार्कमा आएका यात्रुसँग खुट्टा समाएर झुण्डिने गरेका नेपाली होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दीपेन सुवेदीले बताउनुभयो । दुई हप्ताअघि उनीहरुलाई प्रहरीले भारत पठाएको भए पनि पुनः फर्केर आएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यही मङ्सिर २९ गते घोषणा गरी भोक मेट्नकै लागि सडकमा आउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रमखु विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो । त्यही घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा आश्रम र महानगरले सडकमा असहाय, बेसहारा, मगन्ते, मदिरा खाएर बस्नेको अवस्थाको अध्ययन थालेको छ । केही दिनबाट उनीहरुको व्यवस्थापनको अभियानको थालनी हुने बताउँदै उक्त घोषणा अभियानको उपसमितिकी संयोजक गुजेश्वरी श्रेष्ठले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक तयारी करिब ९० प्रतिशत सकिएको बताउनुभयो ।
१३औँ साग : महिला भलिबलमा नेपाललाई इतिहास रच्ने अवसर
मष्तिष्कमा चोटपछि बालबालिकामा देखिने अल्पनिद्राले स्मरण समस्या